Hesekiel 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔkaa abosonsomfo anim (1-11)
Yerusalem rentumi nkwati atemmu (12-23)
Atreneefo baasa, Noa, Daniel, ne Hiob (14, 20)
14 Na Israel mpanyimfo no bi baa me nkyɛn na wɔbɛtenaa m’anim.+ 2 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: 3 “Onipa ba, mmarima yi asi wɔn bo sɛ wobedi wɔn abosom fĩ* no akyi, na hintidua a wɔde ato hɔ no ama nkurɔfo reyɛ bɔne. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mitie wɔn abisade?+ 4 Afei wo ne wɔn nkasa na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: “Sɛ Israelni bi asi ne bo sɛ obedi n’abosom fĩ akyi na ɔde hintidua to hɔ ma nkurɔfo yɛ bɔne na sɛ ɔde n’abisade bɛto odiyifo anim a, me Yehowa, mebua no sɛnea n’abosom fĩ no dodow te. 5 Mede ehu bɛhyɛ Israel fi koma mu,* efisɛ wɔn nyinaa awae afi me ho akodi wɔn abosom fĩ no akyi.”’+ 6 “Enti ka kyerɛ Israel fi sɛ, ‘Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: “Monsan mmra, montwe mo ho mfi mo abosom fĩ no ho; monnan mo ho mfi akyiwade a moreyɛ no nyinaa ho.+ 7 Sɛ Israelni anaa ɔhɔho a ɔte Israel twe ne ho fi me ho na osi ne bo sɛ obedi n’abosom fĩ akyi, na ɔde hintidua to hɔ ma nkurɔfo yɛ bɔne na sɛ ɔba odiyifo nkyɛn de n’abisade bɛto n’anim+ a, me Yehowa, m’ankasa meyi n’ano. 8 Mɛma m’ani asa saa onipa no, na mede no bɛyɛ sɛnnahɔ ne akasabebu, na metwa no afi me nkurɔfo mu;+ na mubehu sɛ mene Yehowa.”’ 9 “‘Na sɛ odiyifo no ka nnaadaasɛm bi a, me Yehowa na madaadaa odiyifo no;+ na mɛteɛ me nsa wɔ no so na masɛe no pasaa afi me man Israel mu. 10 Na wɔn bɔne ho nsunsuanso bɛba wɔn ti so. Ɔdebisafo no bɔne bɛyɛ te sɛ odiyifo no bɔne pɛpɛɛpɛ, 11 na Israel fi amman amfi m’akyi na wɔamfa wɔn nneɛma bɔne nyinaa angu wɔn ho fĩ bio. Afei wɔbɛyɛ me man na me nso mayɛ wɔn Nyankopɔn,+ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni.” 12 Na Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 13 “Onipa ba, sɛ asaase bi anni nokware na ɛyɛ me bɔne a, mɛteɛ me nsa wɔ so na mama aduan ho ayɛ den ama no;*+ mɛma ɔkɔm aba so+ na matwa onipa ne aboa biara afi so.”+ 14 “‘Sɛ Noa,+ Daniel,+ ne Hiob+ mpo wɔ kurow no mu a, anka mmarima baasa yi nkutoo na wɔn trenee nti wobegye wɔn ho* nkwa,’+ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni.” 15 “‘Sɛ mema mmoa bɔne bɛfa asaase no so kunkum ɛso nnipa* ma ɛdan amamfo na mmoa bɔne no nti obiara ntwam mfa hɔ+ a, 16 mete ase yi, mmarima baasa yi mpo wɔ hɔ a, anka wɔrentumi nnye wɔn mma mmarima anaa wɔn mma mmea; wɔn nkutoo na wobegye wɔn ho nkwa, na asaase no bɛdan amamfo,’ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni.” 17 “‘Anaa sɛ metwe asaase no so sekan,+ na meka sɛ: “Sekan mmɛfa asaase no so,” na mikunkum nnipa ne mmoa fi so+ a, 18 mete ase yi, mmarima baasa yi mpo wɔ hɔ a, anka wɔrentumi nnye wɔn mma mmarima anaa wɔn mma mmea; wɔn nkutoo na wɔn trenee nti wobegye wɔn ho nkwa,’ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni.” 19 “‘Na sɛ mede nsanyare a edi awu ba asaase no so+ na mihwie m’abufuw gu so ma mogya hwie gu, na mitwa onipa ne aboa biara fi so, 20 na sɛ Noa,+ Daniel,+ ne Hiob+ mpo wɔ hɔ a, mete ase yi, anka wɔrentumi nnye wɔn mma mmarima anaa wɔn mma mmea; wɔn nkutoo na wɔn trenee nti wobegye wɔn ho* nkwa,’+ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni.” 21 “Enti nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: ‘Saa ara na ɛbɛba bere a mede asotwe anan* yi,+ afoa,* ɔkɔm, mmoa bɔne, ne nsanyare a edi awu+ aba Yerusalem so de atwa nnipa ne mmoa afi so no.+ 22 Nanso ebinom benya wɔn ti adidi mu na wɔde wɔn afi adi;+ wɔyɛ mma mmarima ne mma mmea. Wɔbɛba mo nkyɛn, na sɛ muhu wɔn akwan ne wɔn nneyɛe a, mmusu ne biribiara a mede baa Yerusalem so no, mo werɛ bɛkyekye wɔ ho.’” 23 “‘Sɛ muhu wɔn akwan ne wɔn nneyɛe a, mo werɛ bɛkyekye, na mubehu sɛ nea mede baa kurow no so no fata,’+ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni.”
^ Hebri asɛmfua a wɔde dii dwuma wɔ ha no, ebetumi aba sɛ ɛne asɛmfua “tiafi” na ɛnam, na wɔka de bu biribi animtiaa.
^ Nt., “Meso Israel fi koma mu akyere wɔn.”
^ Nt., “mebubu paanoo nnua.” Ebetumi aba sɛ ɛyɛ nnua a na wɔde paanoo sensɛn so de sie.
^ Anaa “wobegye wɔn kra.”
^ Anaa “kunkum ne mma.”
^ Anaa “nneɛma anan a mede bebu wɔn atɛn atwe wɔn aso.”
^ Anaa “sekan a wɔde kɔ ɔko.”